Mba ho fantatr’izao tontolo izao
Hianareo no vavolombelona , hoy Jehovah ary izaho no andriamanitrareo. Isa. 43:12
Ny kristianina velona dia hanana fijoroana velona hozaraina. Raha nanaraka an’i Jesosy tamin’ny dingana rehetra nalehany ianao, dia hanana zavatra mibaribary azo hampifandraisana amin’ny fomba nitarihany anao. Afaka milaza ny fomba nivelomanao ny teny fikasany ianao, ka nahitanao ny fahamarinan’ny fampanantenana. Afaka asehonao amin’ny alalan’ny marika velona eo amin’ny fiverenana ho any amin’ny taona maro lasa. Tiantsika ny handre matetika araka izay azo atao ny fijoroana tsotra, feno hafanan’ny adin’ny fo sy ireo fandresena (...)
Ny tena kristianina tsirairay dia hanana atrehina ho fampiharana ireo fitsipiky ny fahamarinana toy ny fahatsapana azy ireo . Ilay kapitenin’ny famonjena antsika dia miantso ho amin’ny fijoroana ho vavolombelona vaovao avy any amin’ny sahan’asa. Ireo izay nampahorian’ny fahavalon’ny fahamarinana sy ny mpanohitra ny fanahy, ary nitondra ny tenan’izy ireo tahaka izay nataon’i Jesosy tamin’ny ora nitsarana Azy, dia hanana fijoroana ho vavolombelona hozaraina izay hampangorovitsika ny fon’ireo izay mandre. Izy ireo indrindra no ho vavolombelon’i Jesosy.
Mandrakariva dia tsy tsapantsika ny herin’ny ohatra aseho. Entina hifandray amin’ny hafa isika, izay manao zavatra tsy mety amin’ny fomba samihafa; mety tsy mahafinaritra, mpanao didy jadona, mahery fiteny izy ireo. Rehefa mifandray amin’izy ireo dia mila manana faharetana, fiaretana, fahatsaram-panahy, fahalemem-panahy isika (...). Misy fitsapana sy fangejana ho antsika rehetra, tsy maintsy hatrehana; satria ato anatin’ny tontolo feno ahiahy, tahotra ary fahadisoam-panantenana isika. Saingy ireo fanorisorenana mitohy ireo dia tsy maintsy atrehina amin’ny fanahin’i Kristy. Amin’ny alalan’ny fahasoavana dia afaka ny ho ambony noho ireo manodidina antsika isika , ary hihazona ny fanahintsika ho tony sy tsy ho voahelingelina eo anivin’ireo zava-tsarotra sy ahiahin’ny fiainana andavanandro. Tokony haneho an’i Kristy araka izany eo amin’izao tontolo izao isika.
Nikatsaka ny hamonjy izao tontolo izao i Kristy, tsy tamin’ny fanahafana azy anefa, fa tamin’ny fanehoana tamin’izao tontolo izao ny hery manovan’ny fahasoavan’Andriamanitra mba hamoolavola sy hanome lasitra ny toetra maha-olombelona hanahaka ny toetran’i Kristy.